ချီဖွေ ရေကာတာ စီမံကိန်း စတင်
ဖနိဒါ | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၁၇ မိနစ်
ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ)။ ။ ကချင်ပြည်နယ် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ၇ ခုမှ ဒုတိယအကြီးဆုံး ချီဖွေရေကာတာ စီမံကိန်း ဖွင့်ပွဲ ယနေ့ကျင်းပသည်။ချီဖွေမြို့မြောက်ဘက် ၁ဝ မိုင်ကွာ မန်ဒုံကျေးရွာအနီး မေခမြစ်တွင် တည်ဆောက်နေသော ချီဖွေရေကာတာ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစတင်သည့် အခမ်းအနားသို့ အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်း၊ မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် ဇေယျာအောင်တို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု ကေအိုင်အို အသိုင်းအဝိုင်းမှ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ စွမ်းအင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံ့မှု ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်
ချီဖွေရေကာတာ စီမံကိန်း မြေပုံ
အေးရှားဝေါ ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်း အကောင်အထည် ဖော်နေသော စီမံကိန်းအတွင်း မေခမြစ်ပေါ်တွင် တံတားဆောက်ရန် ရှိသဖြင့် စစ်အစိုးရနှင့် ကချင်လွတ် မြောက် ရေး အဖွဲ့တို့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကာ လက်ရှိ ချီဖွေလုံခြုံရေးကို ပူးတွဲ တာဝန်ယူထားသည်ဟု ကချင်အဖွဲ့ သတင်းရင်းမြစ်တခုက ပြောသည်။မေခမြစ် အနောက်ဘက်ခြမ်းသည် ကေအိုင်အို၏ တပ်မဟာ ၁ လက်အောက် တပ်ရင်း ၁ဝ အုပ်ချုပ်သည့် နယ်မြေဖြစ်ပြီး မေခမြစ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းသည် နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီ ဖြစ်သော ယခင် ကချင်ဒီမိုကရေစီသစ် တပ်မတော် ထိန်းချုပ်နယ်မြေ ဖြစ်သည်။
ချီဖွေရေကာတာ စီမံကိန်းကြောင့် လယ်ဧကပေါင်း ၁ဝဝ ကျော် ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်ဟု ယမန်နှစ် အောက်တိုဘာလက ကချင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကွန်ယက်အဖွဲ့ KDND ၏ “ရေဖုံးလွှမ်းမှုကို ခုခံ တွန်းလှန်ခြင်း” အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ကေအိုင်အို အုပ်ချုပ်သည့် နယ်မြေမှ ညော်မောပါ၊ ကျန်နောင်ရွာကြီးများ အပါအဝင် ရွာငယ် အနည်းဆုံး ၃ဝ ကျော် ယင်းစီမံကိန်းကြောင့် ရွှေ့ရမည် ဖြစ်သော်လည်း ယနေ့ထိ ပြောင်းရွှေ့ရန် မပြောသေးကြောင်း သိရသည်။
ချီဖွေ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း စတင်ခြင်းအခမ်းအနား ဖိတ်ကြားလွှာ
ဧရာဝတီ၊ မေခ၊ မလိခမြစ်ကြောင်းတလျှောက်ရှိ မြစ်ဆုံ၊ ချီဖွေ၊ ခေါင်လံဖူး၊ ပရှီး၊ ဖီဇော၊ လဇာ၊ လကင် စသည့် ဒေသများ၌ အများဆုံး ၃,၆ဝဝ မဂ္ဂါဝပ်မှ အနည်းဆုံး ၁,၄ဝဝ မဂ္ဂါဝပ် စုစုပေါင်း ၁၃,၃၆ဝ မဂ္ဂါဝပ် ထုတ်လုပ်မည်ဟု စစ်အစိုးရက ၂ဝဝ၇ မေ ၆ ရက်က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ကျေးရွာ ၆ဝ ခန့်က လူပေါင်း ၁၅,ဝဝဝ ခန့် ပြောင်းရွှေ့ခံရမည်ဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောင်းချရန် ဖြစ်သည်ဟု ကချင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး ကွန်ယက်အဖွဲ့ KDNG မှ ဆိုသည်။
ဒုတိယ အကြီးဆုံး ချီဖွေ ရေကာတာ စီမံကိန်းမှ မဂ္ဂါဝပ် ၂ဝဝဝ ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ဧရာဝတီမြစ်ပေါ်မှ မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းက ၃၆ဝဝ မဂ္ဂါဝပ် ထုတ်လုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထိုရေကာတာ စီမံကိန်း နှစ်ခုကို ပထမဆုံး အကောင်အထည်ဖော်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
မြစ်ဆုံအောက်ဘက် မြစ်ကြီးနားမြို့မှ မိုင် ၂ဝ အကွာ ကျိန်ခရန်နှင့် လုံကာဇွပ်ရွာကြားတွင် အောင်မြင်သာ စံပြကျေးရွာဟု အမည်ပေးကာ မနေ့ကအပ်နှင်းပွဲ ကျင်းပခဲ့သည်။ ၁၆ ဦးဆံ့ တိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ ကွန်ကရစ်လမ်းနှင့် တံတား ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားပါ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မန္တလေး စိမ်းရောင်စို ဟောပြောပွဲ လူ ၃၀၀ တက်
အောင်မြတ်စိုး | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၃၀ မိနစ်
ဘန်ကောက် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မန္တလေးဆင်ခြေဖုံးတွင် စိမ်းရောင်စိုအဖွဲ့က ယမန်နေ့က ပထမဆုံးကျင်းပသော ပတ်ဝန်းကျင် ဟောပြောပွဲသို့ လူ ၃ဝဝ ခန့် တက်ပြီး ပရိသတ်များကို ထမင်းကျွေး ဧည့်ခံခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ရှိ မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်တွင် ကျင်းပသော “ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၊ သဘာဝ ဝန်းကျင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်” ဆိုသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲကို မန္တလေး စာရေးဆရာများ ဦးဆောင်သော စိမ်းရောင်စိုအဖွဲ့က ကျင်းပသည်။
မိုးလေဝသပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်က ရာသီဥတု
အပြာင်းအလဲကို အဓိကထားဟောကာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပညာရှင် ဦးဝင်းမျိုးသူက ကမ္ဘာကြီး၏ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် အိုဇုန်းလွှာ အကြောင်းများ ဟောသည်ဟု တက်ရောက်ခဲ့သူတဦးက ဆိုသည်။“အကျိုးအမြတ်ကတော့ အများကြီး ရလိုက်ပါတယ်။ ဟောပြောပွဲ တက်လာကြသူတွေမှာ စာရေးဆရာ တော်တော်များများ ပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့ တတွေရော တက်ရောက်လာကြတဲ့သူတွေရော ရာသီဥတုဆိုင်ရာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အသိတွေ သိကြရပါတယ်” ဟု အခမ်းအနား တက်ရောက်သူ တဦးက မဇ္ဈိမသို့ ပောသည်။
စိမ်းရောင်စိုအဖွဲ့ကို ယခုနှစ်မေလ(၂၁)ရက်တွင် စာရေးဆရာများ၊ သစ်ပင်ချစ်သူများဖြင့် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခဲ့သည်မှာ (၁၈)ကြိမ်ရှိခဲ့ကာ အပင်ရေအားဖြင့် (၅,ဝဝဝ) ကျော်ကို မန္တလေးနှင့် အနီိးတဝိုက်ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ စာသင်ကျောင်းများတွင် စိုက်ပျိုးပေးခဲ့သည်ဟု အဖွဲ့ဦးဆောင်သူတဦးက ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် မန္တလေးရေဘေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်လေဘေး ကူညီရေးနှင့် စာသင်ကျောင်းဆောင်များ ဆောက်လုပ်မှုတို့ကိုလည်း အဖွဲ့က ပြုလုပ်နေသည်။
မန္တလေးတွင် ယခုနှစ်မေလက အပူလှိုင်း ဖြတ်ခဲ့၍ သက်ကြီးရွယ်အိုနှင့် ကလေးသူငယ်များ သေဆုံးခဲ့ကြရသည်။ သို့အတွက် စိမ်းရောင်စို ပေါ်ပေါက်လာရသည်ဟု သူကဆိုသည်။“လူတွေကို ပတ်ဝန်းကျင်ရာသီဥတု ပြောင်းလဲ လာ တာနဲ့အမျှ ဖြစ်လာမယ့် သဘာဝ အသိပညာ ပေးချင်တာရယ် သိပြီးတော့ လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ချင်စိတ် ရှိလာအောင်ရယ် ရည်ရွယ်ပါတယ်” ဟု စိမ်းရောင်စိုအဖွဲ့မှ ကိုမောင်မောင်ဦးက မဇ္ဈိမသို့ပြောသည်။
နောက်ထပ်လည်း ဟောပြောပွဲများ ဆက်လုပ်သွားမည်ဟု ကိုမောင်မောင်ဦးက ဆိုသည်။ ကုန်ကျစရိတ် အစုစုအတွက် မြို့ခံ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် စေတနာရှင် အလှူရှင်များက လှူဒါန်းသည်။
ကျောင်းက ကောက်ခံသည့် ငွေမထည့်နိုင်သူများကို ဆရာမက ရိုက်နှက်
အတန်းပိုင်ဆရာမက ကျောင်းသားများထံ ငွေကြေးကောက်ခံရာတွင် မထည့်နိုင်သည့် ကျောင်းသားများအား ရိုက်နှက်မှုကို ပြုလုပ်နေသည့်အတွက် ကျောင်းသားမိဘများ မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြသည်။ရန်ကုန်တိုင်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် အထက (၂) ပဉ္စမတန်း (F)မှ အတန်းပိုင်းဆရာမ ဒေါ်စန်းစန်းဝင်းက ငွေကြေးမထည့်နိုင်သည့် ကျောင်းသားများကို ရိုက်နှက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျောင်းသားမိဘတဦးက ပြောသည်။“ကျောင်းမှာ ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ကလေးတယောက်ကို ၁၅၀၀ ကျပ် ကောက်ပါတယ်။ အဲဒါကို (၅) တန်း (F) အခန်းက အတန်းပိုင် ဆရာမက အတင်းကောက်ခံပြီး ပိုက်ဆံမပေးနိုင်တဲ့ ကလေးတွေအားလုံးကို ရိုက်တာ၊ အဲဒီအတွက် မိဘတွေက မကျေနပ်ကြဘူး” ဟု ပြောသည်/ ကျောင်းသားများထံမှ ကျောင်းသားစုံညီပွဲတော်အတွက် (၅၀၀) ကျပ်၊ ပြက္ခဒိန်ကြေး (၅၀၀) ကျပ်၊ ကျောင်းဆရာမတစ်ယောက် ပင်စင်ယူသွားသည့်အတွက် ကျောင်းသားတဦးလျှင် (၃၀၀) ကျပ်၊ စာမေးပွဲကြေး (၂၀၀) ကျပ် အသီးသီးကောက်ခံနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
“ပိုက်ဆံကောက်တာက သဒ္ဒါကြေးအနေနဲ့ မကောက်ခံဘဲ အတင်းဓါးမြတိုက်သလို ကောက်ခံနေတာ၊ ကျောင်းစတက်ကတည်းက ကောက်ခံနေတဲ့ အခွန်ခတွေက အရမ်းများလွန်တဲ့အပြင် ဘာကြေးကို ဘယ်လိုပေးနေရမှန်း မသိအောင် ခဏခဏပေးနေရတယ်” ဟု ကျောင်းသားမိဘတဦးက ဆက်ပြောသည် ကျောင်းသားမိဘများ အနေဖြင့် ယင်းကဲ့သို့ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမများ၏ လုပ်ရပ်ကို အထက်ပညာရေး အာဏာပိုင်များထံ တိုင်တန်းလိုသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက လာရောက်စစ်ဆေးမှုသာရှိပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိကြောင်း၎င်းက ဆက်ပြောသည်။“တိုင်ရင်လည်း သူတို့လူနဲ့ သူတို့ဆိုတော့ အချည်းနှီးဖြစ်မှာဆိုတာကြောင့် မတိုင်ဖြစ်တာ၊ တိုင်လည်း အထက်ကလာစစ်တာဘဲရှိတယ် အရေးယူတာ တခါမှမတွေ့ဘူးသေးဘူး” ဟု ပြောသည်။မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေးစနစ်တွင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများစွာရှိပြီး ပညာရေးကို ငွေဖြင့်ပေးဝယ်နေရကာ ငွေကြေးမတတ်နိုင်သည့်အတွက် ကျောင်းထွက်ရသည့် ကျောင်းသားပေါင်းများစွာရှိကြောင်း ကျောင်းသားမိဘတဦးက ပြောသည်။
ဒီကေဘီအေနှင့် ၄ ရက်မြောက် တိုက်ပွဲ
ကျော်ခ | အင်္ဂါနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၂၉ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ကရင်ပြည်နယ်တွင် နယ်ခြားစောင့်တပ်ပြောင်းရေး လက်မခံသော တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် ဒီကေဘီအေ နှင့် စစ်အစိုးရတပ်များ ၄ ရက်မြောက် တိုက်ပွဲ ဆက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်း ဒီကေဘီအေ ဗဟို ဌာနချုပ်က ယနေ့မနက်ကပြောသည်။ယနေ့မနက်ပိုင်း မြဝတီမြို့နယ် ဖလူးလေး ဘုရားကုန်းတွင် ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်သက် ဦးစီးသည့် ဒီကေဘီအေ ကလို့ထူးဖော အမှတ် ၂ ဗျူဟာ တပ်ရင်းများနှင့် စစ်ဆင်ရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေးဌာနချုပ် ၁၂ လက်အောက်ခံ ခမရ ၅၄၇၊ ၃၅၆၊ ခလရ ၂၃ဝ တို့ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေသည်ဟု ဆိုသည်။“ကျနော်တို့ ဘက်က ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်ကျော်သက် လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းတွေနဲ့ စစ်တပ်နဲ့ ဒီနေ့မနက်ပိုင်း ဘုရားကုန်း မှာ ပစ်နေကြပြီ။ အခုအချိန်ထိ တိုက်နေတုန်းပဲ ထိခိုက်၊ အသေအပျောက်ကတော့ ဘာစာရင်းမှ မရသေးဘူး” ဟု ဒီကေဘီအေ ဗဟိုဆက်သွယ်ရေးဌာနချုပ်မှ ဗိုလ်မှူး ချစ်စရာက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ယနေ့မနက် ၁၁ နာရီ ၂၅ မိနစ်က စတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး မဇ္ဈိမက ဒီကေဘီအေ ဗဟို ဌာနချုပ်သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချိန် ထိုင်းစံတော်ချိန် ၁ နာရီ ခွဲထိ တိုက်ခိုက်နေသေး ကြောင်း သိရသည်။မြဝတီမြို့နယ်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ေ ဝါလေဒေသ ကနဲလေးတွင်လည်း ၉ဝ၉ တပ်ရင်းနှင့် ကလို့ထူးဘော ဗဟို လုံခြုံရေး တပ်ခွဲတို့ ပူးပေါင်း၍ ဗိုလ်မှူး ဗညားဝင်း ဦးစီးသည့် ခလရ ၄ဝ၉ စစ်ကြောင်း ၂ နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဒီကေဘီအေဘက်က ပြောသည်။“ဒီနေ့မနက် ၇ နာရီလောက်က ကနဲလေးဂွင်မှာ နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်တုန်း ပြေးလွှားရင်းနဲ့ ကျနော်တို့ ထောင်ထားတဲ့ မိုင်းနင်းမိပြီး ဒဏ်ရာရသွားတာ။ မနေ့ကလဲ အဲဒီမိုင်းဂွင်ထဲမှာပဲ ဗိုလ်မှူးဗညားဝင်းတပ်ကပဲ ၂ ယောက် မိုင်းနင်းမိပြီး ခြေထောက်တွေ ပြတ်ကုန်တယ်” ဟု ဗိုလ်မှူး ချစ်စရာက ပြောသည်။စစ်အစိုးရက နယ်စပ်တွင် ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်နေသောတိုက်ပွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့နယ် ဖလူးကြီး၊ ဖလူးလေးနှင့် ကော့ကရိတ် ဝေါလေဒေသတွင် ယခုလ ၁၈ ရက်ကစ၍ဖြစ်ပွားသော တိုက်ပွဲများကြောင့် လူ ၅ဝဝ ကျော် စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ကာ ထိုင်းနိုင်ငံဘက် ရောက်ရှိလာကြောင်း ထိုင်းနယ်စပ်မြို့ မဲဆောက်အခြစိုက် မယ်တော်ဆေးခန်း ကျန်းမာရေးမှူး ဦးသာဝင်းက ပြောသည်။
ဒုက္ခသည်များ ထိုင်းအာဏာပိုင်များထံ တရားဝင်ခိုလှုံခွင့် တောင်းဆိုပါက သေနတ်သံများ ငြိမ်သွားလျှင် ချက်ချင်းပြန်ပို့မည်ကို စိုးရိမ်ကြသဖြင့် မဲဆောက်မြို့၊ ဖုတ်ဖရာ့၊ မဲ့ကိုကင်းရွာရှိ အသိအိမ်များနှင့် လယ်တဲများ၊ စိုက်ပျိုးရေးခြံများ၊ သစ်ပင်များနှင့် သောင်ရင်း ချောင်းဘေးများတွင် မိုးကာစများခင်း၍ ပုန်းအောင်း ခိုလှုံနေကြသည်ဟု ဦးသာဝင်းက ပြောသည်။အကယ်၍ နအဖ စစ်တပ်က အလုံးအရင်းဖြင့် ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ပါက အင်အား ၁ဝဝဝ ကျော်သာရှိသည့် ဒီကေဘီအေ အနေဖြင့် ပြန်လည် ခုခံနိုင်စွမ်းမရှိပေမည့် နိုင်ငံရေးအရ မဖြေရှင်းမချင်း ပြောက်ကျားစနစ်ဖြင့် စစ်အစိုးရကို လက်နက်ကိုင်တိုက်သွားမည်ဟု ဗိုလ်မှူးစောအေဝမ်းက ပြောသည်။
1. ချီဖွေ ရေကာတာ စီမံကိန်း စတင်
2. မန္တလေး စိမ်းရောင်စို ဟောပြောပွဲ လူ ၃၀၀ တက်
3. သီရိမင်္ဂလာဈေး ပြောင်းရမည်
4. မြန်မာသင်္ဘောသား ၂၃ ဦး မိသားစုနှင့် အဆက်အသွယ်ရ
5. ဂီရိအကူ ၄၅ ရာနှုန်းသာ ပေးနိုင်သေးကြောင်း ကုလပူးပေါင်းအဖွဲ့ ပြော
6. အသင်းအဖွဲ့ ဥပဒေပြင်ရန်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးထံ တောင်းဆို
7. ဒီကေဘီအေနှင့် ၄ ရက်မြောက် တိုက်ပွဲ
8. ကရင်ပြည်နယ်တွင်း တိုက်ပွဲများ ဆက်ဖြစ်
9. မြဝတီနှင့် ကော့ကရိတ်တွင် တိုက်ပွဲများ ဆက်ဖြစ်
10. ဘုရားသုံးဆူတွင် ဒီကေဘီအေနှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်
11. မဲဆောက် မီးပန်းဖောက်မှု မြဝတီလန့်
12. DKBA တချို့ KNU နဲ့ပေါင်းဟုဆို
13. ငွေညှစ်ဂိုဏ်းပုံစံ မြန်မာ့အခွန်စနစ်
14. ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေးမှာ အင်အား တထောင်ရှိပါသည်
မြန်မာနိုင်ငံက အာဏာရူးတွေကတော့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အမြဲထိမ်းသိမ်း နေပါတယ် တဲ့ ... ဖတ်ရှု့ လိုက်ကြပါဦး။
မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ လျှို့ဝှက်စီမံကိန်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုပုံပါ...။ ပြည်တွင်းမှ မျိုးချစ် စစ်သည်တစ်ဦး ပေးပို့လာတဲ့ ဓာတ်ပုံ၊ သတင်းအချက်အလက် များထဲမှ သတင်းဓာတ်ပုံ တစ်ပုံကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...။
ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု အာဏာပြိုကွဲသွားပုံကိုကြည့်ပါ။ ကျနော့်အတွေ့အကြုံကိုပြောရရင် စစ်တပ်ထဲမှာ အောက်ခြေထုညီညွှတ်တဲ့အခါ အထက်အရာရှိတွေ အလျှော့ပေးရပါတယ်။ တခါက စစ်ရေယာဉ်တစီးမှာ စစ်သည်တွေ အားလုံးညှိပြီး အိပ်နေကြလို့ ရေယာဉ် စက်နှိုးဖို့ အခက်အခဲရှိပြီး စစ်ရေယာဉ်မှူး အခက် ကြုံရဖူးပါတယ်။ ကိုယ့်ဖက်ကအားနည်းရင် အလျှော့ပေး စေ့စပ်မှုလုပ်တာဟာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ စရိုက်သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ ထောက်ခံမှုမရတဲ့ အစိုးရတစ်ရပ်ဟာ စစ်တပ်အောက်ခြေထုကပါ အမိန့်မနာခံတော့ဘူးဆိုရင် ဘယ်လို အာဏာရှိတော့မှာလဲ။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ တန်ခိုး ထွားနေတာဟာ အနုမြူလက်နက်ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ သူတို့အမိန့်အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ လက်အောက်ခံ အရာရှိ/စစ်သည်တွေကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ပြည်တင်းမင်းမခံနိုင်” ဆိုတဲ့ မြန်မာဆိုရိုးစကားပုံကိုလည်း ရှိတယ်မဟုတ်ပါလား။
ဗဒတတပ်ပေါင်းစုမှ ဖြန့်ဝေခဲ့သည့်စာရွက်များတွင် တိုင်းရင်းသားတွေကို ထိုးစစ်ဆင်တာ ချက်ချင်းရပ်၊ ပြည်တွင်းစစ်ချက်ချင်းရပ်၊ စစ်ပွဲအလိုမရှိ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာရေး ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ပေး စသည့်စစ်ဆန့်ကျင် ရေးသားစာများ ပါဝင်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေး ဂျိုးဖြူငှက် မြန်မာပြည်မြေပုံဆီသို့ ပျံသန်းနေဟန် သရုပ်ဖော်ထားသောပုံများ ပါရှိသည်။ လှုပ်ရှားမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ တိုင်းရင်းသားများ၏ အရေးကိုငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းရန် စစ်အစိုးရအား တောင်းဆိုပြီး မြေပြန့်နေ ပြည်သူများက တောင်ပေါ်ဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားများ တစိတ်တ၀မ်းထဲရှိကြောင်း ပြသခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဗဒတ၏စစ်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုကို ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ တွံ့တေးမြို့နယ်၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ သုံးခွမြို့နယ်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်၊ လသာမြို့နယ်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို.နယ်၊ ဒေါပုံမြို.နယ်၊ မင်္ဂတောင်ညွန့်ြ
Posted by Burma Democratic Concern at 23:04